Kali Linux 2017.2 မှာ ဘာတွေ ပိုပါလာလဲ? ဘယ်လို upgrade လုပ်မလဲ? - Khit Minnyo
Kali Kali Linux 2017.2 မှာ ဘာတွေ ပိုပါလာလဲ? ဘယ်လို upgrade လုပ်မလဲ?
Kali Linux 2017.2 မှာ ဘာတွေ ပိုပါလာလဲ? ဘယ်လို upgrade လုပ်မလဲ?
by KhitMinnyo on October 05, 2017 in Kali
Kali Linux 2017.2 မှာ ဘာတွေ အပိုပါလာလဲ လို့ မေးထားတဲ့ တစ်ယောက်အတွက်ပါ။
Kali Linux 2017.1 ကို 2017, April 25 မှာ release လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ခု လက်ရှိက
Kali Linux 2017.2 ပါ။ 2017, September 20 မှာ စတင် release လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ Kali Linux Version ကနေ upgrade လုပ်လိုပါက
၁။ apt update && apt upgrade -y && apt dist-upgrade -y
နဲ့ upgrade ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၂။ apt full-upgrade နဲ့လည်း upgrade လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါ နည်းလမ်း နှစ်ခုကနေ upgrade လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Upgrade မပြုလုပ်မီ သတိထားရမှာတွေက
၁။ မိမိတို့ရဲ့ system မှာ root partition အတွက် free space အလုံအလောက် ရှိ မရှိ ဆိုတာ စစ်ဆေးပါ
၂။ မိမိတို့ရဲ့ လက်ရှိ version ကို စစ်ဆေးပါ။ ဥပမာ - မိမိတို့က လက်ရှိမှာ Kali Linux Version2(or) Kali Linux 2016 ကို အသုံးပြုနေတာဆိုရင် upgrade တိုက်ရိုက် မပြုလုပ်သင့်ပါ။ မိမိတို့က Kali Linux 2017.1 ကို သုံးနေတာဆိုရင်တော့ တိုက်ရိုက် upgrade လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း upgrade လုပ်နေသူတွေအတွက်တော့ error မရှိပါ။ Kali Linux Version2(or) Kali Linux 2016 ကနေ upgrade ပြုလုပ်ပါက Login Loop error, Login ဝင်ပြီးတဲ့အခါ Black screen (or) white screen error စတာတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အထက် ဖော်ပြပါ အချက် နှစ်ချက်ကို စစ်ဆေးပြီးမှ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါက ကျွန်တော့်ရဲ့ ယခု website ရှိ chat box မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတဲ့အပိုင်းကို ခုမှ ရောာက်တော့တယ် :)
Kali Linux 2017.2 မှာ ဘာတွေ အပိုပါလာလဲဆိုတော့
New and Updated Packages in Kali 2017.2
In addition to all of the standard security and package updates that come to us via Debian Testing, we have also added more thanadozen new tools to the repositories,afew of which are listed below. There are some really nice additions so we encourage you to ‘apt install’ the ones that pique your interest and check them out.
hurl –auseful little hexadecimal and URL encoder/decoder
phishery – phishery lets you inject SSL-enabled basic auth phishing URLs intoa.docx Word document
ssh-audit – an SSH server auditor that checks for encryption types, banners, compression, and more
apt2 – an Automated Penetration Testing Toolkit that runs its own scans or imports results from various scanners, and takes action on them
bloodhound – uses graph theory to reveal the hidden or unintended relationships within Active Directory
crackmapexec –apost-exploitation tool to help automate the assessment of large Active Directory networks
dbeaver – powerful GUI database manager that supports the most popular databases, including MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, and many more
brutespray – automatically attempts default credentials on discovered services
On top of all the new packages, this release also includes numerous package updates, including jd-gui, dnsenum, edb-debugger, wpscan, watobo, burpsuite, and many others. To check out the full list of updates and additions, refer to the Kali changelog on our bug tracker.
Kali Linux ရဲ့ Official Page ကနေ ကူးယူဖော်ပြပါသည်
By KhitMinnyo on October 05, 2017